ओली आफैले गरे नेकपा फुटेको घोषणा, के भन्छन प्रचण्ड ? — Imandarmedia.com
ओली आफैले गरे नेकपा फुटेको घोषणा, के भन्छन प्रचण्ड ?
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पार्टी फुटिसकेको घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहालसँगको भेटमा यस्तो बताएका हुन् । उनले आफुलाई पार्टीबाट निक्लन समेत प्रचण्डलाई ध’म्की दिएको बताइएको छ ।